Salaadda Santa Barbara. ? Lacag, Jacayl iyo Ilaalin.
Ducada Santa Barbara. Waxaa kufsaday haweenka kale ee dhulka Santa Barbara waxay mudan tahay in la ixtiraamo maadaama ay goob joog u ahayd nacaybka qofka ay ahayd inuu iyada jeclaado. Mid kiciya u ducee Santa Barbara Waxay naga caawin kartaa xaalado badan iyo xitaa kuwa aan rajo ka qabnay.
Nolosheeda nolosheeda iimaankeeda oo ay ka buuxaan xanuun iyo silica, si kastaba ha noqotee, waxay ku sii jirtay dagaalka iyada oo la dagaallantay dagaalkeedii iyada oo inkasta oo guuldaradii cadowgeedu ay soo dhowdahay, waxay gaadhay taajkii tagitaanka ee loo ballanqaaday quduusiinta aaminka ah Waxay la dagaallamaan qalbiga.
Haweeney iimaan daran, adag, aamin ah oo xulufadeena ah waqtiyada murugada.
1 Ducada Santa Barbara
1.1 Santa Barbara duco lacag
1.2 Tukashada Santa Barbara barako jacayl
1.3 Salaadda Saint Barbara waa loo barakeeyey ilaalinteeda
1.4 Loogu talagalay cadawga
1.5 Inuu xukumo lammaanaha aan aaminka ahayn
Wuxuu ku noolaa dhulka wakhtigii qarnigii saddexaad ee Aasiyada Yar.
Noloshiisa wuxuu ku dhacay dhibaato badan diintiisa darteed tan iyo markii ay ka soo horjeedeen kuwa reerkiisa ah. Taariikhdu waxay sheegaysaa in aabihiis uu ahaa cadow xoog badan oo masiixiga ah wakhtigaas, oo ahayd diin ay Barbara si xor ah u sheegatay.
Waxay ahayd isaga, Dioscoro, aabihiis, oo ku xiray gabal aad u dheer oo ciqaab u ah kala duwanaashahe diimeed.
Waqtiyadi ay xirneyd waxay ku xirneyd caqiidadeeda, waa la baabtiisay oo diinteena mar walba lagu wacdiyi jiray.
Waxaa la yiri qalcaddii waxay lahayd hal daaqad oo kaliya waxayna amar ku bixisay laba kale in loo furo astaan ​​ahaan midnimada Ilaah.
Markuu aabbaheed soo noqday, wuu dacweeyay oo wuxuu la kulmay xumaan iyo bahdil waana Dioscoro laftiisa oo madaxiisa seeftiisa ku gooyay buur dusheeda. Waxaa la sheegay in dilkan ka dib falaad cirka ka timid oo ku dhacday naftiisa.
Santa Barbara duco lacag
Santa Barbara, awood badan, waxay i caawisaa inaan ku guuleysto dagaalkaan.
Adiga oo aadan ku dhicin jirrabaadda sharka, kan jacaylkaaga sheeganayay, dhibaato oo dhan, oo ku soo baxday guul, Waxaan kaa baryayaa inaad baryootamto Ilaaha ah, Sayidkeenna, inuu iga caawiyo sidii aan ula qabsan lahaa xilligan uu igu tijaabinayo.
Isaga, hoygiisa weyn, ha i siiyo ciidanka ku filan halka wanaaggu noqon doono guuleystaha.
(Sameyso Codsigaaga Lacagta ee ugu Horeeya)
Sayidow, inaad siisay Santa Barbara xoog la yaab leh si ay uga hortagto caroyinka iyo silica ugu weyn ee aaminka kuu ah, waxaan kaa codsaneynaa, sidii iyada oo kale, inaan ku xoog badnaan karno dhibaato iyo is-hoosaysiin barwaaqo ah si aan u gaarno farxaddeeda weligeed ah.
Ciise Masiix, Sayidkeenna.
(sameyso Codsigaaga Lacagta Labaad)
Barakow Barbara, oo ku caashaqday gabadhaadii daahir ahaantaada purpura dhiiggaaga jacaylka Rabbiga, iga ilaali dabaysha, dababka, masiibooyinka iyo masiibooyinka dunidan oo dhan.
Ii samatabixi geerida lama filaan ah. Ii baryo Rabbiga inuu iga caawiyo inaan gaaro barwaaqo noloshan, si aan ugu noolaado saaxiibtinimo muqadas ah iyo inaan gaaro dhamaadka maalmahayga nabadgalyo nimcadiisa ilaahnimo.
(samee codsi saddexaad oo lacag ah)
Salaaddan Santa Barbara ee lacagta waa mid aad u xoog badan!
Waxay ina baratay inaan ku tiirsanaano Ilaah, inaan rumeysanaano in ballanqaadyadeeda ay rumoobeen iyo inay ku noolaadaan wax badan iyo in yar. Waxay oo saboolnimo soo gaadhay Waxay naga caawin kartaa in aan barwaaqo ahaanno.
U soo duceynta lacag si ay noogu timaado waqtigan dhibaatada waa lama huraan iyo weydiisashada Santa Barbara ee iimaanka waa ficil adeec ah oo ay tahay inaan maalin walba sameyno.
hay salaadda ama salaadda Waxay nagu hagi karaan inaan weydiinno sida saxda ah. Si kastaba ha noqotee, waxa muhiimka ah iyo damaanada kaliya ee aan haysanaa waa inaan ogaano in ducadeenii la aqbalay waa inay iimaanka naga dhigto.
Tukashada Santa Barbara barako jacayl
Dagaal yahanka cirka, Barakada Santa Barbara, dhagayso codsigeyga jacayl markaan ..
(sheeg magacaaga iyo kan aad jeceshahay)
Ku midoobaan jidhka iyo nafta, adoo dhawraya si aan qofna ugu dhicin jidkiisa farxadda iyo wadajirka. Magaalada barakaysan ee Saint Barbara waxay subkay timaha ee (ku celi magacyada) harraadkooda kula bakhtii adiga infinito jacaylka ay u qabaan wanaagooda caddaaladda awoodda leh ee dagaalka aan macquul ahayn ee difaaca kuwa jecel weligood (ku celi magacaaga iyo kan aad jeceshahay).
Jacaylku wuxuu kamid ahaa sababaha farxadda iyo murugada ugu caansan tan iyo bilowgii waqtiga iyo ilaa maantadan.
Santa Barbara aabihiis jacaylkiisa waa loo diiday gabadhiisa taasina waxay keentay inuu ku kaco ficil naxdin leh sida goynta gabadhiisa.
Ma jiro qof ka wanaagsan iyada, oo necbahay cidda ay tahay inaanu yeelin, inuu fahmo xannuunkeenna ku saabsan haddii aan jacayl lagu soo celin.
Tukashadani waxay naga caawin kartaa sidii aan nafteenna uga xorroon lahayn tabar-darrada xun sidaa awgeed jacaylku wuu ina soo gaadhayaa oo wuu inaga yaabi doonaa.
Salaadda Saint Barbara waa loo barakeeyey ilaalinteeda
Saint Barbara, bikradda barakeysan, xoogga weyn oo weyn, Ilaah ha kula jiro, oo adiguna ha ila joogto wadada wanaagga.
Seeftaada guuleysatay iga badbaadi xumaanta, xaqdarrada, masayrka iyo indhaha xun. Awoodda hillaaca, iga ilaali cadaawayaashayda, weynee dabka dabakayga qunyar socodka ah oo u daa inuu guuleysto.
Koob koobkaaga iyo khamrigaagaba ku hay xoogga jirkayga iyo ruuxaagaba dagaalka adag iyo dagaalka.
Aqbal tufaaxkayga iyo dookhayga hadiyado aan had iyo jeer maskaxda ku hayo fikirradayda iyo gurigayga, waxaanan kaa baryayaa, waligaa ha iga tegin oo ha ii timaadid mar kasta oo aan kugu andacoodo inaad difaacayso caqiidadayda, dhulkayga, reerkayga iyo reerkayga halganka; taasna aakhirka waxaad marwalba igu kaliftaa inaan faano adiga oo kale.
Tani waa duco qurux badan oo loogu talagalay Barakaysan Barbara si loo ilaaliyo Santa.
Aalad aan adeegsan karno markii aan u baahanahay, ducadu sidoo kale waxay noqotaa gaashaankayaga oo aan ka hortagno khataraha kaliya ee sidoo kale ka dhanka ah wax kasta oo xun ee nolosheena ama kuwa qoysaskeena ay doonayaan inay gaaraan.
Waxaa jira marqaatiyo badan oo rumaystayaasha aaminka ah ee jawaabta waqtigooda ka helay Santa Barbara waqtiga murugada, marka aan weydiisano magangal nafteena ama xubin qoyska ka mid ah waxay noqoneysaa mid waxtar leh.
Loogu talagalay cadawga
Ilaahoow! iga fog dhinacayga, noloshayda, Kuwaas xun iyo kuwa xunxun ee ku dhaca.
Waxaan kuu imid, Santa Barbara si aad u jahwareeriso, iga soocan si aysan ii dhaawaceyninna waxaan kugu qayshaday iimaan iyo naftayda.
Adiga, ilaaliyaha sharafta leh ee ragga, gargaaraha barakeysan ee kuu duceeya iyo Christian deeqsi ah in aad laabtaada u furto kuwa wanaagsan, caawimaad i siiya, isaga ayaan ku galayaa isagaana ka tagi doonaa dhiigga qalbigaaga, si aad aniga iga xoreysid .
Ka fogee masayrka iyo khiyaanada, difaaco Waxaan ka baryayaa xumaanta iyo cadaawayaasha, in sharku i taabto oo nacayb iima waxyeelo, wuxuu iga kaxeeyaa deriska xun iyo saaxiibka xun, wuxuu ku wareersadaa cadaawayaashayda si aysan saameyn iigu yeelan, ii caawi in aan xukumo kuwa sida xun ii doonaya si aan uga guuleysto xaalad kasta oo i dhibaata.
Yaanay u oggolaan inay carqaladeeyaan socodkayga Masiixiga oo haddii ay ku adkaystaan, cadaabta inay tahay ciqaabta xumaanta.
Iga samatabbixi Saint Barbara oo dhan oo ka ducaysa xumaanta oo dhan, Ii samatabbixi Saint Barbara oo dhan oo laga barakeeyey cadaawayaasha oo dhan, noloshayda ka dhawr waxyeelada si aan ugu noolaado nabad iyo xasilloonaan. Loogu talagalay Ciise iyo bikradda.
Ka faa'iidayso awoodda ducada Santa Barbara ee awoodda badan ee cadowga.
Kulligeen waan haysannaa cadaawayaasha iyo xitaa gurigeenna. Waxaan ku aragnaa taarikhda Santa Barbara sida aabbaheed u dilay ay dishay.
Waxaa laga yaabaa inaadan ku dhicin silsilad toos ah tan oo kale laakiin ma ahan inaad waligaa isku hallaysid cadawga.
Ducada loogu talo galay cadaawayaasha cadawga ee ku kacda Santa Barbara waxay noqon kartaa sida kaliya ee aan uga badbaadi karno silica iyo qatarta.
Inuu xukumo lammaanaha aan aaminka ahayn
Waad barakaysan tahay Santa Barbara adiga oo dad badan ka dhigi kara dib u heshiisiin, wax yar ii samee, jacayl hel, qalbigayga ka dhig mid sharaf leh oo run ah, jacayl samee, qalbigayga ayaa geli kara oo iga buuxin kara farxad, waxaan rabaa si aad u awoodo inaad ogaato jacaylka dhabta ah, dareenka dhabta ah, Santa Barbara, adiga oo awood badan ku dhex leh, i sii nimcadaas, dalabkaygu ha kuu yimaado, si aan u helo ducadaada, Santa wuxuu jecel yahay, jacayl kaamil ah bilaa been, adigu inaad leedahay akhlaaq wanaag oo aad wax kastaaba aad ugu faraxday dunida Ii kaalay oo i sii fursad aan ku helo barakadaada, waxaan kaa doonayaa wakhti kale oo aan kuugu soo diro ducooyinkayga.
Baryadayda aan Ilaah ugu baryo si uu noloshayda uga dhigo jacayl buuxa, nabad buuxda waxaad ka dhigi kartaa mid mucjiso ah Santa Barbara, waxaan kaa codsanayaa inaad i siiso jaceyl, kalgacal badan iyo jacayl badan, farxad badan, hammiyo wanaagsan, fikrado wanaagsan, camal wanaagsan, iga caawi inaan ku guuleysto, jacayl, waxay ii noqon doontaa sidii talaabo, waddo, Santa Barbara, adigu wax walba waad sameyn kartaa, waxaad i siisaa oo aad dareentaa dareenka dhabta ah ee jaceylka ii imaada, aamin aaminkaaga iyo awoodaada wanaag, aamiin.
Nooca salaadda noocan ah waxaa wali si weyn u dhaleeceeya qaar ka mid ah kuwa u haysta inay tahay ficil kali-talisnimo ah oo laga sameeyo kibirka lagu dhaawaco ama laga tago. Laakiin tani run ma aha.
Tukashada si aad u hesho xukun qof ama xaalad gaar ah waa ficil jacayl oo ka soo baxa rajo la’aanta u baahan mucjiso ama aan awoodin helitaanka.
Salaad la rumaysto ayaa marwalba heli doonta jawaabta aad dalbaneysid, wax alla wixii codsi ah, Salaadda Saint Barbara ee barakeysan waa mid awood leh.